Rakhiyeyaasha Rakkoobo ee Dabiiciga ah & Iskudhiska Bacriminta Qalabka Qalabka Mashiinka iyo Warshad | YiZheng
Ku Mashiinka Mashiinka Wareega ee Rotary waa qalab caadi ah soosaarka bacriminta isku dhafan, inta badan loo isticmaalo kala soocida qalabka la soo celiyo iyo badeecada dhammaatay, sidoo kale waa la ogaadaa kala soocidda alaabada dhamaadka, iyo xitaa kala saarista alaabada dhamaadka.
Waa maxay Mashiinka Wareegga Wareegga Wareegtada ah?
Mashiinka Mashiinka Wareega ee Rotary waxaa badanaa loo isticmaalaa kala-soocidda alaabada dhammaatay (budada ama granules) iyo alaabada soo-celinta, waxayna sidoo kale xaqiijin kartaa qiimeynta alaabooyinka, sidaa darteed alaabada dhammaatay (budada ama granule) ayaa si siman loo kala saari karaa.
Waa nooc cusub oo ah qalab-is-nadiifin - qalab gaar ah oo lagu baaro. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa baaritaanka maaddooyinka kala duwan ee adag ee granularity ka yar 300mm. Waxay leedahay waxtar sare, buuq yar, qadar yar oo boodh ah, nolol adeeg dheer, dayactir yar, dayactir fudud iyo waxyaabo kale oo badan. Awoodda baaritaanka waa 60 tan / saacad ~ 1000 tan / saacad. Waa qalab ku habboon habka wax soo saarka ee bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta isku dhafan.
Is-nadiifinta Mashiinka Mashiinka Wareega ee Rotary wuxuu sameeyaa wareejin macquul ah ee qalabka silsiladda kala-soocida qalabka iyada oo loo marayo nidaamka gaabinta nooca gearbox. Mashiinka kala-sooca xarunta waa shaashad ka kooban dhowr giraan bir bir ah oo taariikhi ah. Mashiinka kala-sooca xarunta ayaa lagu rakibay diyaaradda dhulka. Xaaladda xagjirka ah, maaddadu waxay gelaysaa shabaqa silsiladda ee ka soo baxda dhamaadka sare ee silsiladda kala-soocidda dhexe inta lagu jiro hawsha shaqada. Inta lagu jiro wareegga kala-soocida kala-soocida, sheyga ganaaxa ayaa laga soocaa xagga sare ilaa hoose iyadoo loo marayo mudada shaashadda oo ka kooban birta gogosha leh, walxaha qalafsanina waa laga soocay dhamaadka hoose ee silsiladda kala-goynta waxaana loo qaadi doonaa mashiinka burbura. Qalabka waxaa la siiyaa nooc saxan ah oo si otomaatig ah u nadiifiya. Inta lagu jiro nidaamka kala-saarista, jirka shaashadda ayaa si isdaba joog ah "loo shanleeyaa" habka nadiifinta iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa qaraabada ah ee habka nadiifinta iyo jirka shaandhada, sidaas darteed jirka shaandhada marwalba waa la nadiifiyaa inta lagu jiro howlaha shaqada. Saamayn kuma yeelan doonto waxtarka baaritaanka sababtoo ah xirmada shaashadda.
Astaamaha Waxqabadka ee Mashiinka Mashiinka Wareega ee Rotary
1. Waxtarka baaritaanka sare. Sababtoo ah qalabku wuxuu leeyahay farsamo nadiifinta saxanka, waligiis kama hor istaagi karo shaashadda, sidaas awgeed wuxuu hagaajinayaa waxtarka baaritaanka qalabka.
2. Jawi shaqo oo wanaagsan. Nidaamka baaritaanka oo dhan waxaa loogu talagalay daboolka boodhka xiran, gebi ahaanba baabi'inaya ifafaalaha duulaya ee baaritaanka iyo hagaajinta deegaanka shaqada.
3. Qaylada hoose ee qalabka. Inta lagu jiro hawlgalka, buuqa ay soo saaraan maaddada iyo shaashadda wareegeysa ayaa gebi ahaanba go'doominaysa daboolka boodhka la xiray, taas oo yaraynaysa buuqa qalabka.
4. Dayactir ku habboon. Qalabkani wuxuu xiraa daaqada indha indheynta qalabka labada dhinac ee daboolka boodhka, shaqaaluhuna way ilaalin karaan hawlgalka qalabka wakhti kasta inta lagu jiro shaqada.
5.Cimri dheer. Shaashadan qalabka waxay ka kooban tahay dhowr bir oo bir ah, oo aaggeeda isweydaarsigu aad uga ballaaran yahay aagga isweydaarsiga qaybta shaashadaha qalabka kala soocista.
Rotary Drum Sieving Machine Video Muuqaalka
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Rotary Drum
Xawaaraha Wareega (r / min)
Hore: Mashiinka Qaboojinta Qulqulka Kaabashada
Xiga: Khadka Tooska ah ee gariirka